Otu esi ahazi ihe nchọgharị TOR na ngwaọrụ gam akporo | Gam akporosis
Ejirila netwọk TOR maka nchọgharị na-enweghị aha na kọmputa, ma na oge nke oge ọ ga-ekwe omume ịnweta ya site na ngwaọrụ ọ bụla na-abụghị Windows. Ndị ọrụ gam akporo na mwepụta nke ngwa ọrụ gọọmentị nwere ike irite uru ugbu a na atụmatụ ya niile.
Ruo oge na-adịbeghị anya ọ dị mkpa ịnwe ngwa abụọ iji rụọ ọrụ ntanetị, ngwa ndị a kapịrị ọnụ bụ Orweb (ihe nchọgharị ahụ) na Orbot (njikọ ahụ). Ekwesịrị ịhazi nke abụọ ka emesịa nwee ike ịchọgharị na nzuzo na ihe nchọgharị Orweb.
Iji jiri netwọk TOR site na ngwaọrụ gam akporo, budata Tor Browser, ngwa nke gafeegogo ọtụtụ betas tupu i mee nkwụsị ikpeazụ. Nhazi nke ngwa ahụ abatalarị ahazi, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhazi ụfọdụ n'ime nhọrọ ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
1 Etu esi ahazi Nchọgharị TOR site na ngwaọrụ gam akporo
2 Họrọ ọnọdụ gbara ọchịchịrị
3 Wụnye mgbakwunye ndị bụ isi
Etu esi ahazi Nchọgharị TOR site na ngwaọrụ gam akporo
Isi ihe bụ ibudata ngwa Nchọgharị TOR site na Storelọ Ahịa PlayỌ bụ ihe nchọgharị n'efu, ngwa ngwa ma anyị nwere ike ịchọgharị na-enweghị aha n'oge ọ bụla, na-elekọta nzuzo anyị na net. TOR Browser nwere ọtụtụ-oyi akwa izo ya ezo, okporo ụzọ na-ebute site ná na-ezoro ezo na atọ n'ígwé.
Ozugbo ibudatara ma wụnye ya, ọ ga-egosi gị nhọrọ atọ ịhọrọ site na, onye kwesịrị ekwesị n'echiche a bụ nke dị n'etiti, «Nchebe»dị ka ọ na-ewepụ ihe nrụọrụ weebụ nke na-adịkarị ize ndụ. Ozugbo ahọrọla nke a, anyị ga-eme obere mmezi na ihe nchọgharị ahụ.
Site na ndabara, ọ na-ewepụ screenshots maka nchekwa, pịa isi ihe atọ dị na ala aka nri na ịnweta Ntọala. Ozugbo n'ime ntọala pịrịgaa na na "Advanced" rụọ ọrụ "Kwe ka nseta ihuenyo"Also nwekwara nhọrọ ime ka ọ ndabere gị nchọgharị, ị nwere ike rụọ ọrụ ya na General - Nịm dị ka ndabere nchọgharị.
Họrọ ọnọdụ gbara ọchịchịrị
TOR Browser nwekwara ọnọdụ gbara ọchịchịrị ama ama, enwere ike ịgbalite ya ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ya na dịka na ngwa ndị ọzọ ọ ga - enyere anyị aka ịghara ịda mbà n'anya nke ukwuu ma chekwaa obere pasent nke batrị. Ọnọdụ a na-agbakwụnyekwa ndo nke agba ntụ, ya mere ọchichiri adịchaghị.
Iji mee ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị na Nchọgharị TOR ị ga-eme ihe ndị a:
Mepee ngwa TOR Browser na ekwentị gị
N'okpuru aka nri nweta isi ihe atọ ma pịa Ntọala
Ugbu a na General pịa Hazie na n'ikpeazụ na Okwu họrọ "Ọchịchịrị" iji rụọ ọrụ ọnọdụ ahụ
Ozugbo ịmechara nke a, ị ga-arụ ọrụ ọchichiri
Wụnye mgbakwunye ndị bụ isi
TOR Browser, dị ka ihe nchọgharị ndị ọzọ, ga-ahapụ anyị ka anyị tinye ụfọdụ tinye iji mee ka ọ rụọ ọrụ, ọ na-eme na Google Chrome, Firefox na-ekwekwa ya, agbanyeghị na ndị ọzọ. Ihe mgbakwunye tinyekwara iji TOR Browser bụ ndị a:
Nkọwa dị elu YouTube: Ihe mgbakwunye a ga-egwu ọdịnaya dị elu mgbe niile, ọ bụrụhaala na vidiyo ahụ na-enye ya ohere ma na-atụ aro vidiyo ndị a na-egwu na HD gaa n'ihu. Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị bụ isi ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ohere nke ikpo okwu a ma ama. Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ agile karịa Google ọkpụkpọ.
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị: Isi okwu gbara ọchịchịrị a dabara na saịtị niile, ihe ọ bụla websaịtị bụ, lekọta anya gị ma ị nwere ike iji oge a wee chọgharịa n’oge ọ bụla. Ọ bụ nhọrọ na-abụghị nke TOR Browser na-enye ugbu a, na-atụ aro nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya n'oge ehihie na ọkachasị n'abalị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ịtọlite ​​Ihe Nchọgharị TOR na ngwaọrụ gam akporo